अलौकिक सबिता माताको हेर्नैपर्ने भिडियो – सबै समस्याको समाधानको लागि यस्तो शक्ती दीइन, मन्त्र हेर्नुहोस ! – Complete Nepali News Portal
अलौकिक सबिता माताको हेर्नैपर्ने भिडियो – सबै समस्याको समाधानको लागि यस्तो शक्ती दीइन, मन्त्र हेर्नुहोस !
सर्वसाधारणहरुसमेत गरेर अहिलेसम्म झण्डै १३ लाख जनाको भविष्य हेरिसकेको बताउने सवितालाई भक्तजनहरुले माताजी भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दछन्। साथसाथै उनी अहिले देश विदेशमा नेपाली माताजीको नामबाट नै प्रख्यात छिन्। लामो समय देखि अरुको भिविष्य हेर्दै आए पनि उनलाई भिडियोमा गालीगलौज गर्नेको पनि एक जमात छ।
तर आज हामि उनको जन्मदिनमा उनले दिएको केहि रोचक कुराबारे कुरा गर्दै छौ हेरौ |